Maraykanka oo war kale oo cusub ka soo saaray duqeyntii uu dhowaan ka geystay Gaalkacyo – Xeernews24
Maraykanka oo war kale oo cusub ka soo saaray duqeyntii uu dhowaan ka geystay Gaalkacyo
12. Oktober 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ay war ka soo saartay duqeyntii muranka badan dhalisay ee dayuuradaha dalkaas ka fuliyeen dhowaan degaanka Jeexdin ee duleedka magaalada Gaalkacyo.
Qoraal ka soo baxay safaarada ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay si dhow ula shaqeyneyso dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo labada Maamul ee Galmudug iyo Puntland si looga wada hadlo walaacii la xidhiidhay dhacdadii 28kii September ee weerarkii isdifaacidda ahaa ee Mareykanka.
War saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in Mareykanku ay ka war hayaan wararka dhimashada iyo dhaawaca Gaalkacyo iyagoo eedeymahaasi si xooggan u qaatay, waxaana qoraalku intaas ku daray in wasaaradda difaacu bilowday inay qiimeyso cadeymaha rasmiga ah ee dhacdadaas la xiriira si xaqiiqada looga sal gaaro runtana loo cadeeyo.
Safiirka Mareykanka ee Somalia oo kulamo kula yeeshay, bishan October 6dii,7dii, iyo 8dii Muqdisho, odoyaasha qabiilka, hoggaanka sare ee bulshada iyo siyaasadda Koonfurta Gaalkacyo, iyo madaxweynaha Galmudug ee Guuleed.
Waxaa sidoo kale wada hadal uu la yeeshay Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas iyo saraakiisha ciidanka xooga dalka Soomaaliya.
Mareykanku waxaa uu sheegay inuu doonayo inuu horumariyo xiriirka iyo wada shaqeynta ay la leeyihiin ciidanka ammaanka Galmudug iyo kuwa qaranka Soomaaliya si loola dagaallamo Al-Shabaab.
Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa Maraykanku ku booriyey iney wada hadal dhab ah galaan si xal looga gaaro khilaafka ka dhex jira, xaalad nabadeed iyo dib u heshiisiin balaarana loo helo
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/usa.jpg 139 362 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-12 09:00:232016-10-12 09:00:23Maraykanka oo war kale oo cusub ka soo saaray duqeyntii uu dhowaan ka geystay Gaalkacyo
Xildhibaanada Mucaaradka Jabuuti Oo Eedaymo U Jeediyay Dawladda Dalkaasi Daawo Sawirada: Angela Merkel oo Booqasho ku tagtay Itoobiya xili dalkaasi ay...